Heshiis horudhac ah oo laga gaaray xiisad ka jirtay Baladweyne-hiiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 18 November 2015 18 November 2015
Nabadoon Max’ed Cabdi Max’ud Lixle Afhayeenka Odayaasha dhaqanka Gobolka Hiiraan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Heshiis horudhac ah ay ka gaareen xiisad maalmihii dambe ka taagneed Magaalada Baladweyne ee Gobolka Hiiraan taas oo la xiriirta dilka Sarkaal ka tirsanaa Hay’adda Miino barista Qaramada Midoobay ee Main Action loogu geystay Magaaladaasi.
Sidoo kale Nabadoon Lixle ayaa xusay in Maleeshiyo beeleed ay isku heyb yihiin ay xireen waddo Muhiim u ah Magaalada Baladweyne taas oo uu sheegay dib u furisteeda lagu guuleystay.
Max’ed Cabdi Max’ud ayaa ku nuux nuuxsaday in heshiiska horudhaca ah ee laga gaaray Xiisadda ka aloosneed Magaalada Baladweyne oo ka koobnaa 4 qodob ay ka mid tahay in aan la siyaasadeynin xaaladda miiska wadahadalkana wax weliba lagu dhameeyo.
Dhaq dhaqaaqyadii Magaalada Baladweyne ayaa maalmihii la soo dhaafay hakad ku jiray kadib xiisad ka jirtay Magaaladaasi Baladweyne oo timid kadib dil Magaalada loogu geystay Mahdi Xuseen Macow oo ka tirsanaa hay’adda Miino baarista qaramada Midoobay ee Main Action.
Cabdiraxmaan Faroole oo ku sheegay dadka ka qeyb galaya shirarka wadatashiga kuwa aan wax la socon.